Your IT Mate - Umlingani Wakho Othembekile we-IT
Uzakwethu Othembekile we-IT
Ukubethelwa kwe-PGP / Decryption
I-Akhawunti Yesikhathi Sokuphila Kwelayisense Yeqembu Lenkampani
Ilayisense ye-Windows 10 yamadivayisi amaningi
I-Google Drayivu - Isizinda sangokwezifiso - Isitoreji esingenamkhawulo - Ukusetshenziswa Kwesikhathi Sempilo
Abasebenzisi be-X XUMUMXNNXX unyaka owodwa Abasebenzisi be-365 Amadivayisi we-3- Ilayisense Yokuqinisekisa
Imikhiqizo ye-AutoDesk eshibhile unyaka we-1 - Ilayisense Egcwele Ngokugcwele
Ukhiye weWindows 10 / Windows 7 32 / 64bit, ama-PC owodwa / amaningi
Khetha okukhethwa kukhoWin 10 EnterpriseWin 10 ProfessionalWin 7 ProfessionalWin 7 EnterpriseWin 10 Thuthukisa Ikhaya ku-Pro
Khetha okukhethwa kukhoI-PC eyodwaAma-PC amaningiAma-PC we-5
Khetha izinketho Bheka ku-Cart
Sikunikeza i-Microsoft Product Key yangempela kufaka nencazelo yokulandwa enemininingwane, ekuvumela ukuthi usebenze futhi ulande iWindows System Working ngqo kuwebhusayithi yeMicrosoft. Okhiye bethu belayisense yi-100% iyiqiniso futhi kuhlolwa njalo ubuqiniso.
>>> Chofoza Lapha Ukwenza Umnikelo <<
Khetha okukhethwa kukhoI-2016 DatacenterAma-Essentials we-2016I-Standard Standard ye-2016I-2012 DatacenterAma-Essentials we-2012I-Standard Standard ye-2012I-2012 R2 DatacenterI-2012 R2 EssentialsI-2012 R2 standard
Khetha okukhethwa kukhoKusha sha
Sikunikeza i-Microsoft Product Key yangempela kufaka nencazelo yokulandwa enemininingwane, ekuvumela ukuthi uvule futhi ulande iWindows Server (noma iyiphi inguqulo) ngqo kuwebhusayithi yeMicrosoft. Okhiye bethu belayisense yi-100% iyiqiniso futhi kuhlolwa njalo ubuqiniso.
I-Grammarly.com I-Akhawunti Yempilo Yonke - I-Akhawunti Engahlanganyelwanga
Engeza ekalishini Bheka ku-Cart
Sikunikeza i-akhawunti yokungena yangempela yokusetshenziswa kwakho, hhayi ukwaba nomunye umuntu, okuvumela ukuthi ungene ngemvume kunoma iyiphi insiza kuwo wonke amapulatifomu.
I-Rosetta Stone - Ilayisense ye-akhawunti yokuphila yonke ngolimi ngalunye
Sikunikeza i-akhawunti ebhalisiwe yeRosetta usebenzisa ikheli lakho le-imeyili ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ukungena ngemvume kwisoftware yakho kwi-Mac / PC / Ucingo kanye nokuvumelanisa inqubekela phambili phakathi kwamadivayisi ukuze uqhubeke nokufunda kwakho noma kunini, nganoma yisiphi isikhathi.
Imikhiqizo eshibhile ye-AutoDesk - Ilayisense Yokubhaliswa Kweminyaka ye-3 - Ilayisense Yezifundo
Sikunikeza ukhiye welayisense Yomkhiqizo wokufunda wokusetshenziswa konyaka we-3 kufaka nencazelo eningiliziwe yokulanda, ekuvumela ukuthi usebenze ngqo ngesikhathi sokufakwa. Okhiye bethu belayisense yi-100% iyiqiniso futhi kuhlolwa njalo ubuqiniso.
I-Microsoft Office 365 - iWin-Mac-Ucingo-Ithebhulethi - Amadivayisi we-5 - Isikhathi sokuphila
Sikunikeza i-akhawunti ye-Microsoft Office kubandakanya imininingwane yokungena ngemvume kanye nemiyalo yokulanda, ekuvumela ukuthi uvule futhi ulande izifakeli ngqo kwiwebhusayithi ye-Microsoft.
Fihla i-Ass yami - i-Akhawunti ye-VPN - Ukubhaliswa konyaka we-2 - I-Brand New, iminyaka ye-2
Khetha okukhethwa kukho1 ngonyakaiminyaka 2iminyaka 3
I-FiMyAss VPN ivikela ikheli lakho le-IP, ngakho-ke okwenzayo ku-inthanethi akubonakali ngumhlinzeki wakho wesevisi ye-Intanethi kanye nanoma yiziphi izingqungquthela ze-creepy. Le layisensi inikezwe i-imeyili yakho futhi uwena kuphela umsebenzisi osemthethweni ukulawula i-akhawunti yakho.
Ilayisense le-TeamViewer Corporate - Ukusetshenziswa Kwesikhathi se-LifeTime - Iziteshi eziningi - I-New never used, 63
Khetha okukhethwa kukhoOkusha Akukaze Kusetshenziswe
Khetha okukhethwa kukho324863plus
Ama-akhawunti we- “Brand New” Genuine TeamViewer omsebenzisi oyedwa athengisayo. Yonke ithengwe ngokusemthethweni iTeamViewer futhi isilungele ukuyisebenzisa.
I-Akhawunti Yobomi be-Google Drayivu - Isitoreji Esingenamkhawulo - isizinda se-edu.com
Khetha okukhethwa kukhoedu.com domaingdrive.netisizinda sakho sangokwezifiso.com
I-akhawunti ye-Google Drayivu yokusetshenziswa kwempilo yonke kanye nesitoreji esingenamkhawulo, izikhohlwa zokushayela igcwele, hhayi iThimba Lethimba
Adobe Creative Cloud Nayo yonke iSoftware Yangempela - Ilayisense Yangempela Yonyaka
Khetha okukhethwa kukhoI-Akhawunti yenyanga nenyanga (12m)Ikhodi yelayisense engu-1 Yonyaka
Ungathenga ikhodi yelayisense yokuqalisa kwakho futhi ujabulele zonke izinhlelo zokusebenza nesitoreji nge-Creative Cloud.
Ilayisense Le-TeamViewer Corporate - Ukusetshenziswa Konyaka kwe-1 - Iziteshi ze-3
Abasebenzisi be-MS 365 E3 1 unyaka 5 Abasebenzisi abangama-25 Amadivayisi- Ukhiye Welayisense Oyiqiniso
Sikunikeza i-Microsoft Office Key / i-akhawunti yangempela / i-akhawunti ifaka nencazelo yokulandwa enemininingwane, ekuvumela ukuthi uvule futhi ulande izifakeli ngqo kwiwebhusayithi ye-Microsoft. Okhiye bethu belayisense yi-100% iyiqiniso futhi kuhlolwa njalo ubuqiniso.
Isitolo se-eBay esilinganiswe kakhulu ngama-feed amaningi we-98%
Ilayisense le-TeamViewer Corporate - Ukusetshenziswa Kwesikhathi Sokuphila - Iziteshi eziningi ngu-Mohayudeen (Mannu)
I-Grammarly.com I-Akhawunti Yempilo Yonke - I-Akhawunti Engahlanganyelwanga nguJyoti
Abasebenzisi be-MS 365 E3 1 unyaka 5 Abasebenzisi abangama-25 Amadivayisi- Ukhiye Welayisense Oyiqiniso nge-bmpafe
I-Ofisi ye-MS 2019 Professional Plus - Ukhiye oyi-Authentic - AU stock
Ngiyacela, izaphulelo eziphezulu ze-oda lenqwaba Xhumana nathi ngobuningi obuningi ngentengo engcono. Ungacela ukuthenga ama-akhawunti / amalayisense wangempela ahlelekile kusuka kumasevisi amaningi aku-inthanethi afana ne-VPN, Antivirus, ama-akhawunti wokufunda, i-3Dsky, izingqikithi / amavidiyo / izithombe / izithombe / ukwakhiwa kwezithombe / imodeli ... ama-akhawunti abhaliswe nge-akhawunti yakho ye-imeyili e-60 - Intengo yasekuqaleni ye-70%.
Uma udinga i-invoice yokuthenga kwakho, sicela usithumele imininingwane yebhizinisi lakho kanye nesinye isicelo esikhethekile se-Invoice yangokwezifiso.
Isikhathi seThimba seVidiyo
Indawo: Isikhungo Sokuthenga seCarousel,
ICannington, WA 6107, e-Australia